Bit By Bit - Fametraham-panontaniana - 3.6 fanadihadiana mifandray amin'ny hafa rakitra
Mampifandray fanadihadiana ny hafa dia manome fahafahana anao loharanom-angon-drakitra mba hamokatra vinavina izay te azo atao raha tsy izany.
Ny ankamaroan'ny fanadihadiana no mijoro-irery, tena ao ezaka. Tsy manorina eo amin'ny samy izy ary tsy manararaotra ny hafa rehetra tahirin-kevitra izay misy eo amin'izao tontolo izao. Izany dia hiova. Misy be loatra fotsiny mba ho azo amin'ny alalan'ny tahirin-kevitra fanadihadiana mampifandray ny angon-drakitra hafa loharanom-baovao, toy ny soritry rakitra nomerika noresahina tao amin'ny Toko 2. Izany fahafahana rohy fanadihadiana ny zava-nisongadina rakitra hafa ny hoe mangataka sy mitandrina dia mameno fa tsy solon'ny.
Indrindra indrindra, aho hanavaka fomba roa samy hafa ny mampifandray manontany sy mitandrina: naparitaka manontany sy nampanan-karena nanontany (Sary 3.10). Amin'ny Malagasy nanontany hoe: ny Hafanàm-po an soritra dia tsy misy tombontsoa mivantana hafa noho ny fahaizany mba hanampy hanesorana danja bebe kokoa avy amin'ny valin'ny fandinihana natao. Ao ny nampananana harena nanontany hoe amin'ny lafiny iray hafa, raha ny marina soritry ny Hafanàm-po an manana fototra ohatry ny tombontsoa sy ny valin'ny fandinihana natao teny manodidina manao ny ilaina manodidina azy.
Figure 3.10: roa lehibe mitambatra fomba nomerika soritra sy ny valin'ny fandinihana natao. Amin'ny naparitaka nanontany hoe (fizarana 3.6.1) soritra ny nomerika no ampiasaina mba hanamafisana ny valin'ny fandinihana natao. Amin'ny karena nanontany hoe (fizarana 3.6.2) ny nomerika soritra manana fototra tena ohatry ny tombontsoa sy ny valin'ny fandinihana natao teny manodidina manao ny ilaina manodidina azy.